चौथो नेपाल बिल्डकन र उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी,...
भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका २ सय २० भन्दा बढी निर्माण कम्पनी, डिलर, सवडिलर र बिक्रेताले निर्माण व्यवसाय तथा काष्ठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउने छन्। यह...
Ukita Dahal 410 0
चौथो नेपाल बिल्डकन र उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, शुक्रबार देखि शुरू
छैटौँ म्याग्दी महोत्सव तथा माघेसङ्क्राान्ति मेला
‘उद्योग, व्यापार र कलाको विकास गरौँ, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा पुस २८ देखि माघ ७ गतेसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवमा करिब एक...
Ukita Dahal 279 0
अग्निमोटो इन्कद्वारा पोखरामा मोजो ३०० सि.सि. बाइकक...
महिन्द्रा ग्रुप अन्तर्गतको महिन्द्रा टु ह्विलर्सका आधिकारीक वितरक अग्नि ग्रुप अन्तर्गत अग्नि मोटो इन्कले वहु प्रतिक्षित मोजो बाइक हालै पोखरामा आफ्नो आधिकारीक विक्रेता एसियन अटो मोबाइलस् माफर्त विक्री...
Umesh Dahal 430 0
अग्निमोटो इन्कद्वारा पोखरामा मोजो ३०० सि.सि. बाइकको बिक्रिवितरण शुरु
कस्ताे चिउँडाे भएका मानिसकाे कस्ताे स्वभाव?
खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, ज्याेती शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन्। त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो। मानि...
Umesh Dahal 375 0
धनी कसरी बन्ने? भारतीय धनाढ्य रतन टाटाका १० सुत्र!
जीवनमा धेरै पैसा कमाउने रहर सबै मानिसलाई हुन्छ। हुनपनि सफलताको शिखरमा पुग्ने महत्वकांक्षा मानिस मात्रै हुन्छ। भारतीय उद्याेगपति रतन टाटाले दिएका १० वटा सफलतासुत्र यस प्रकारका छन्ः
Binita Karki 1.3k 0
रनर मोटरसाइकल अब नेपाली बजारमा
रनर ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हाफिजुर रहमान खान, सोही कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी मुकेश शर्मा र रमन मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी रमन महतोले शनिबार ह्यात होटलमा आयोजित एक समारोहका बीच ७ मोडेलका रनर मोटरसाइक...
Jiwan Poudyal 400 0
ओशोः रहस्यमय जीवन, रहस्यमय निधन!
ओशोको जीवन जति रहस्यमयी थियो, त्यति नै रहस्यमय भयाे उनको निधन। साेमबार जन्मजयन्ति मनाइरहँदा अाेशाे निधन भएकाे नै २७ वर्ष भइसकेको छ। तर, अाेशाेका विषयमा खाेज तथा शाेध अझै गम्भीर ढंगले भइरहेका छन्।
Binita Karki 790 0
अब फेसबुक चलाउन पनि सीमारेखा पार गर्नुपर्ने
फेसबुकको नियम अनुसार १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले एकाउन्ट बनाउन पाउँदैनन्। तर पनि धेरै बालबालिकाले फेसबुक र म्यासेन्जर चलाइरहेका हुन्छन्। यसलाई समाधान गर्न फेसबुकले नयाँ एप्लीकेसन ल्याएको हो।
Jiwan Poudyal 619 2
कसैलार्इ मन पराउनु हुन्छ? यी हुन् अाकर्षित गर्ने अ...
विशेषतः युवतीहरुलार्इ कुनै युवाले मन पराउने विषयमा अाफ्ना भाव व्यक्त गर्न सक्दैनन्। महिलाहरुलार्इ पनि केही कुरा सहजै अाकर्षित गर्न सकिन्छ।
Binita Karki 394 12
कसैलार्इ मन पराउनु हुन्छ? यी हुन् अाकर्षित गर्ने अाइडिया!
विश्वलार्इ चकित पार्ने आइफोन एक्सका ६ वटा विशेषता!
एप्पलको बहुप्रतिक्षित आइफोन एक्स विश्व बजारमा आइपुगेको छ। एप्पलको आइफोन एक्समा केही यस्ता फिचरहरु छन्, जुन बिल्कुलै नयाँ र प्रयोगकर्ताहरुलाई नवीनमत अनुभव दिलाउने खालका छन्।
Jiwan Poudyal 460 0
जाडोमा कसरी बचाउने अाफ्नाे छालालार्इ? यस्ता छन् घर...
जाडोमा धेरै मानिसकाे समस्या अाफ्नाे छालासँग सम्बन्धित हुन्छ। फुस्रो र रुखो हुने समस्याबाट धेरै मानिस हैरान हुन्छ। तर, यसकाे समाधान पनि छ। घरेलु विधिबाटै हामी आफ्नो त्वचाको स्याहार गर्न सक्छौं। निम्न उ...
Ukita Dahal 378 0
जाडोमा कसरी बचाउने अाफ्नाे छालालार्इ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
आइफोन–एक्स बजारमा लोकप्रियता हासिल गर्ने क्रममा छ। यो फोनको यति धेरै माग छ कि विश्वमा अग्रिम बुकिङ गर्दा पनि धेरै ग्राहकले फोन खरिद गर्न पाएका छैनन्। तर, आइफोन–एक्स किनिसकेका ग्राहकले चाहिँ फोनमा धेरै...
Jiwan Poudyal 396 0
Binita Karki 683 0
महिलाका स्तन किन बराबर हुँदैनन् ? थाहा पाउनुहाेस्...
स्त्रीको सबैभन्दा आर्कषक अंग हो स्तन। चाहे त्यो महिलाका लागि होस् वा पुरुषका लागी नै किन नहोस्। चाहे त्यो कुनै सौन्दर्य प्रतियोगीतामा होस् वा पौडी पोखरीमा वा अन्य समयमा युवतीको स्तन पहिलो हेराई नै रोज...
महिलाका स्तन किन बराबर हुँदैनन् ? थाहा पाउनुहाेस् १० राेचक तथ्य
कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्त हुन चाहानुहुन्छ? अपनाउह...
कहिलेकाही कपाल झर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। तर, तपाइँको कपाल दैनिक झर्छ भने बेलैमा ध्यान पुर्याउनुहोस्।
Binita Karki 400 0
कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्त हुन चाहानुहुन्छ? अपनाउहाेस् यी टिप्स
अाफ्नाे सहरकाे मेयर बन्ने चाहाना छ? चुनाव जित्नु प...
थियोटाउनले सिम सिटी बिउल्डइट नामक गेम बजारमा ल्याएको छ। यो गेम एन्ड्रोइड मोबाइलमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। सिम सिटी गेम एन्ड्रोइड मोबाइल प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउन्लोड गर्न सकिन्छ।
Binita Karki 290 0
अाफ्नाे सहरकाे मेयर बन्ने चाहाना छ? चुनाव जित्नु पर्दैन! (भिडियाेसहित)
ब्रा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ? कहिलै नगर्नुस् यी ८ गल्...
बजारमा धेरै विकल्प भएपनि महिलाहरु सधैं सही ब्रा छनोट गर्न असमर्थ हुन्छन्। ब्रा किन्ने तरिका थाहा नहुँदा महिलाहरु अन्त्यमा गलत वा महँगो ब्रालाई घरमा ल्याउँछन्। सही र फिट ब्रा खरिद गर्नु कठिन काम होइन ।...
Suvadin Desk 281 0
ब्रा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ? कहिलै नगर्नुस् यी ८ गल्ती
थाहा पाउनुहोस् कुन यौन आसन बढी खतरापूर्ण?
सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो। जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ। सेक्सलाई अझ आनन्दायक बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ।
Suvadin Desk 552 0
जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ? अपन...
जागिरका लागि लिइने अन्तर्वार्ता कुनै औपचारिकतामात्रै होइन। यसमा कुनै पनि क्यान्डिडेट तोकिएको पोस्टका लागि शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विभिन्न पक्षमा सक्षम छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम गरिन्छ। विभिन्न कम्पन...
Santosh Raj Panday 767 1
जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यी पाँच टिप्स
श्रीमतीलाई यसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ, चरमसुखका ला...
भनिन्छ, सेक्स ९० प्रतिशत मानसिक र १० प्रतिशत शारीरिक प्रक्रिया हो। यो कला हो, अनुष्ठान हो। जिन्दगीका आधारभूत र प्रमुख रस तथा सुन्दरतामध्ये एक हो । सेक्स पुरुषत्व या पुंसकत्व देखाउने माध्यम कदापि हो...
Suvadin Desk 339 0
श्रीमतीलाई यसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ, चरमसुखका लागि यी टिप्स अपनाउनुस्
दशैंको चुल्होः के खाने, के नखाने? (हेर्नुहोस्, डा....
‘सुगरका बिरामीले पेटभरि खानु हुँदैन, अड्कल गरी-गरी खानुपर्छ, प्रेसरका बिरामीले चिल्लो कम खाने, दमका बिरामीले धेरै चिसो नखाने, तातो नखाने, धूवाँधुलोबाट टाढा रहनु पर्छ,' डा. प्रधानले भने, ‘स्वास्थ मान्छ...
Kusum Poudyal 2.5k 2
अनुहारकाे सुरक्षा कसरी गर्ने? अपनाउनुस् यी १० टिप्...
हामी सबैको बानी बिहान उठेपछि सबै भन्दा पहिला मुख धुँने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि पनि हामीले दैनिक रुपमा मुख धुने काम गर्नैपर्छ। यसरी दैनिक रुपमा पटकपटक गरिने यो काममा पनि हामीले धेरै गल्ती...
Kusum Poudyal 358 0
लण्डनमा बन्यो विश्वकै ठूलो समोसा, तौल कति होला?
बेलायतमा बनाइएकोे एउटा समोसाले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। बेलायतकोे राजधानी लण्डनमा बनाइएका एक ५३.१ किलो तौल बराबरको समोसा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी वजन भएको समोसाको रुपमा गिनिज बुकमा नाम दर्ता गरा...
Suvadin Desk 660 5
विश्व आदिबासी जनजाति दिवसकाे उल्लास
‘पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन, हाम्रो अभियान’ नारा तय गरिएकाे थियाे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्क...
Santosh Raj Panday 273 0
आज चन्द्रग्रहण, थाहा पाउनुहोस् के गर्नु हुँदैन?
साउन २३ अर्थात् सोमबार (आज) शुक्ल पूर्णिमाका दिन अर्धरात्रि पूर्व खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको छ। सोमबार राति चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। राति ११ बजेर सात मिने...
Suvadin Desk 695 0
फेसबुकमा टेस्टाेनीले कसरी थाहा पाउछ तपार्इंका गाेप...
अहिले फेसबुकमा जाे काेहिले इएनटेस्टाेनी डट कमकाे पाेष्टहरू बाँडिरहेकाे देख्न पाइन्छ। कसैले विहेकाे बारेमा गरिएकाे भविष्यवाणी बाँडेका छन् भने कतिले सुहाउँदाे राजनीतिक पार्टीका बारेमा गरिएका अनुमानहरू ब...
रमण पनेरू 1k 0
फेसबुकमा टेस्टाेनीले कसरी थाहा पाउछ तपार्इंका गाेप्य कुरा?
२० वर्षसम्म महिला बने यी पुरुष
चीनमा एक पुरुष २० वर्षसम्म महिलाको भेषमा रहेको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक भिडियो अनुसार ती ५० पुरुष पछिल्लो २० वर्षदेखि महिलाको रुपमा रहिरहेका थिए।
Suvadin Desk 611 0
महान् बन्ने सूत्र
संसारका महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग एक पटक एक केटोले सोध्यो,–सर आज सारा संसारमा तपाईको नाम चर्चित छ। सबै तपाईको प्रशंसा गर्छन्। तपाईलाई महान् भन्छन्। भन्नुस् न आखिर महान् बन्ने सूत्र के हो ?
Suvadin Desk 472 0
लामो समयसम्म सेक्स नर्गनाले हुन्छन यस्ता समस्या
यौन मानव जीवनको अभिन्न पाटो हो। गास, बास र कपास जस्तै यसको महत्व पनि आफ्नै छ। यौनन विनाको जीवन कल्पना गर्न सकिदैन। शारिरीक सम्वन्ध विनाको संसार नै अधुरो जस्तो हुन्छ। लामो समय शाररिक सम्बन्ध नराख्नुका...
Angad Singh 647 0
किसिङ एलीः जहाँ चुम्बनकै लागि विश्वभरबाट युगल जाे...
किसिङ एलीमा संसार भरिबाट युवायुवतीहरू आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन र त्यो सौभाग्य प्राप्त गर्न आउँछन। किसीङ एलीका प्रत्येक गल्लीमा सिढीहरु बनाइएको छ। जुन त्यहाँको मुख्य विशेषता हो। त्यहाँका प्रत्येक गल्...
Angad Singh 424 0
किसिङ एलीः जहाँ चुम्बनकै लागि विश्वभरबाट युगल जाेडीहरू पुग्छन्